Wowu! Incwadi engcono indiza yakho yeLufthansa esuka eYurophu iye eUnited States ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Wowu! Incwadi engcono indiza yakho yeLufthansa esuka eYurophu iye eUnited States ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • Tourism • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-Lufthansa Ibaleka abantu abangama-76,000 abasuka kwisikhululo senqwelomoya saseFrankfurt kwimpelaveki yokuqala yeholide
Malunga neveki emva kokuphela kokucwangciswa kwezithintelo zokuhamba e-US, iinqwelomoya zeLufthansa Group zazifumana ukonyuka kweenqwelomoya eziya eUnited States.
Ngeentsuku ezithile kwiveki ephelileyo, iinqwelomoya eziwela iAtlantic zanda kathathu kwiveki ephelileyo. Ibango kwiveki ephelileyo kwiindlela ezithile ziphantse zafika ngaphambi kwengxaki
amanqanaba. Iinqwelomoya nge-SWISS ezisuka eZurich naseLufthansa zisuka eFrankfurt zisiya eNew York naseFrankfurt naseZurich zaya eMiami zazinezona ndawo zibhukishe kakhulu kubo bobabini abahambi bokuzonwabisa kunye nabezoshishino. Kuqoqosho lwePremiyamu, ishishini kunye noKlasi lokuQala amatikiti angaphezulu aya e-USA athengwa kunangexesha elinye ngo-2019.
Malunga neveki emva kokuphela kokucwangciswa kwezithintelo zokuhamba e-US, iLufthansa Group
Iinqwelo-moya zeenqwelo moya zisafumana ukunyuka okuthe chatha kweenqwelo-moya eziya eUnited States. Ngokuqinisekileyo
iintsuku kwiveki ephelileyo, iinqwelomoya ezinqumleze iAtlantic zanda kathathu ngaphezulu
Ibango kwiveki ephelileyo kwiindlela ezithile ziphantse zafika ngaphambi kwengxaki
amanqanaba. Iinqwelomoya nge-SWISS ukusuka eZurich naseLufthansa ukusuka eFrankfurt ukuya eNew York
Ukusuka eFrankfurt nase Zurich ukuya eMiami kuye kwabhukishwa phezulu kuzo zombini iindawo zokuzonwabisa
Kuqoqosho lwePremiyamu, ishishini kunye noKlasi lokuQala ngaphezulu amatikiti aya eMelika athengiwe kunangexesha elinye ngo-2019.
Iqela laseLufthansa lidibana nolu nyango lweemfuno zokuphembelela ngokusungula ezongezelelweyo
Iinqwelomoya eziya eMelika ngesaziso esifutshane. ILufthansa kunye ne-SWISS, umzekelo, ziya kubonelela ngokudibeneyo kwenqwelomoya yeenqwelomoya ezintathu zemihla ngemihla eziya eMiami ngesaziso esifutshane ukuqala
Kukho imfuno enamandla kakhulu yeenqwelomoya eziya eU.SA ngoDisemba ozayo. Entsha
Ukubhukisha kwiveki ephelileyo yale nyanga bekuphakamileyo njengoko bekukho ngo-2019
ixesha elifanayo. Iindiza eziya eNew York-ngokwesiko zifunwa kakhulu ngexesha
Ixesha leKrisimesi - sele liqinisiwe ngonxibelelwano olongezelelekileyo.
Iinqwelo-moya zeQela laseLufthansa zinikela ukuya kuthi ga kwi-55 yeeveki zonxibelelwano kwi
INew York ivela kwiindawo ezahlukahlukeneyo zaseYurophu eOstriya, eBelgium, eJamani nase-
ESwitzerland ngoDisemba. Ulwandiso lwexeshana lweenkonzo okwangoku
Yedwa ukuya eNew York naseChicago, iinqwelomoya zeLufthansa Group zibonelela ngoqhakamshelwano lwemihla ngemihla ukusuka eYurophu ngo-Novemba kuneenqwelomoya eziya kwingingqi yeAsia-Pacific yonke.
ILufthansa Group ilindele ukuba ukuvulwa kwe-US kugonye abahambi be-EU
iya kuba ngumqondiso kwamanye amazwe nakwimimandla ukwenza ukuba ukuhamba ngenqwelomoya kwamazwe aphesheya kube lula kwakhona kwaye babuyisele umda kuthintelo lohambo.
Iinqwelomoya ezongezelelweyo ngaphakathi eJamani
Iqela laseLufthansa likwonyusa iinqwelomoya zaseJamani eziya kwiindawo zayo zaseYurophu
njengoko iimfuno zeenqwelomoya zaseMelika ziyaqhubeka nokunyuka. Umzekelo, xa kuthelekiswa noJulayi,
ILufthansa inyusa iinqwelomoya zayo zaseJamani ngeepesenti ezingama-45 ukusuka ekuqaleni
EyeDwarha. Oku kuthetha, phakathi kwezinye izinto ukuba nge-Okthobha kuya kubakho isithoba endaweni yeenqwelomoya zeentsuku ezintandathu ukusuka eFrankfurt ukuya eBerlin. Iindiza ezisuka eFrankfurt zisiya eHamburg ziya kunyuka ukusuka kwisithandathu ukuya kwisibhozo seenqwelomoya mihla le. Imeko iyafana neMunich:
Unxibelelwano lwangoku lwemihla ngemihla ukuya eBerlin luya kwandiswa ukuya kusixhenxe ukuqala
EyeDwarha; endaweni yeenqwelomoya ezihamba yonke imihla ukusuka eMunich ukuya eHamburg, kuya kubakho ukuya kuthi ga
Iinqwelomoya ezili-11 zemihla ngemihla kwixesha elizayo. Kwaye ukuqala ngo-Okthobha, iLufthansa izakuphinda isebenze ngenqwelomoya ngeenqwelo moya ukusuka eHamburg naseBerlin ukuya kwiindawo zayo eFrankfurt naseMunich kusasa nangokuhlwa.
Ngokwandiswa kweshedyuli yokubhabha, unxibelelwano ngakumbi luyafumaneka kulo lonke
usuku. Oku kuthetha ukuba abahambi beshishini abahlala befuna ukubhabha kusasa okanye
ngokuhlwa kuyakuxhamla kwishedyuli ephucukileyo yenqwelomoya njengabanye abahambi.